Roobab kacurtay deegaano ka mid ah Baargaal, xilli ay abaar iyo jiilaal daran ay ka jirtay – Radio Daljir
Roobab kacurtay deegaano ka mid ah Baargaal, xilli ay abaar iyo jiilaal daran ay ka jirtay
Maajo 12, 2012 12:00 b 0
Bargal, May 12 – Roobaabkii guga ayaa ka curtay deegaano ka mid ah degmada Baargaal ee gobolka Bari, waxaaana roobabku ay yimaadeen xilli muddo dheer deegaanku uu ka jiray abaar saamaysay dadka iyo xoolaha.
Gacsho Karuur Siciid oo ka mid ah dadka degmada Baargaal ayaa u sheegay Daljir, shantii sanadood ee lasoo dhaafay wax roob ahi inaysan deegaanku ka da?in, taasina ay saamaysay nolosha dadka iyo xoolo dhaqatada.
Roobabka meelaha ay ka da?een ayaa waxaa ka mid ah tuulooyinka Rassi, Gumaayo, muudiye iyo Bareedo, waxaana roobabku ay maalintii shanaad ku da?ayaan baraago ay biyaha ka cabaan dadka xoolo dhaqatada ah.
Shacabka deegaanada uu roobabku ka da?ay ayaa siweyn usoo dhoweeyey waxaana ay Allah uga mahadnaqeen raxmaddiisa ee uu ku shubay deegaanada Baargaal.
Madaxweynaha Giriiga oo la kalmaya axsaabta waaweyn ee dalkaasi si dowladda isbahaysi ah loo soo dhiso
Baahin: Khamiis, May 10, C/risaaq C. Silfar ~ Daljir ~ Galkacyo. 2 qof oo rayad ah oo lagu dilay Bossaso; Jaamacada PUST oo faraceeda caafimaad ku wareejisay cisbitaalka guud ee Galkacyo; R/wasaare Gaas oo kulamo la yeeshay wasiiro ka socda wadamada S. Afrika & Mozambique; Tababar u soo xirmay ciidamo ka tirsan dawlada federaalka ah; Safiirka Somaliya ee Uganda ayaan ka waraysanay.